Shiinaha xuduud lahayn Steel Tubooyinka Waayo Petroleum arrinkaas, GB9948-2006, Sanon tuuboyinka-saaraha iyo qeybiye | Gold Sanon
Xuduud lahayn Steel Tubooyinka Waayo Petroleum arrinkaas, GB9948-2006, Sanon tuuboyinka
Tuubooyinka bir aan xuduud lahayn, waayo, petroleum arrinkaas , Sered oo sida tuubooyinka fumace, tuubooyinka sarrifka kulaylka a nd
dhuumaha in batroolka iyo warshadii carbon tayada plants.High fasalada steel dhismaha waa 20g,
20mng iyo 25mng, Daawaha fasalada steel dhismaha: 15mog, 20mog, 12crmog, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, iwm
Fasalka Group: 10 , 12CrMo , 15CrMo, 07Crl9Nil0, iwm
Heat Daaweynta: Annealing / caadi / Tempering
Codsiga: tuubooyinka sarrifka kulaylka
Dhulku Daaweynta: Sida Shuruudaha Macaamiisha ee
Isticmaalka: tuubooyinka sarrifka kulaylka
Baaritaanka: ut / MT
tuubooyinka bir aan xuduud lahayn, waayo, petroleum arrinkaas waa lagu dabaqi karo in tuubooyinka bir aan xuduud lahayn, waayo, tuubooyinka foornada, tuubooyinka sarrifka kulaylka iyo tuubooyinka cadaadis warshadaha kiimikada.
Tayo sare leh carbon fasalada steel dhismaha waa 20g, 20mng iyo 25mng.
Daawaha fasalada steel dhismaha: 15mog, 20mog, 12crmog
15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, iwm
Fasalka ee carbon tayo sare leh steel dhismaha: 10 # , 20 #
tayo sare leh carbon fasalada steel dhismaha: 20g, 20mng iyo 25mng
Daawaha fasalada steel dhismaha: 15mog, 20mog, 12crmog, 15CrMoG, 12Cr2MoG, iwm
tayo sare leh carbon steel dhismaha
Daawaha steel dhismaha
kulaylka ahama birta adkaysta
MPA Elong ka dib markii jab A /% Shork kv2 tamarta nuugista / j Tirada engegnaantiinna Brinell
sawirka transver sawirka transver
aan ka yarayn wax ka badan
Waayo, bir leh oo dhumucdiisuna waxay derbiga ka yar tube 5mm ma sameeyo tijaabo darantahay ingeega,
imtixaanka Haydarooliga waa in la fuliyaa for tuubooyinka steel mid mid. Cadaadiska imtixaanka ugu badnaan waa 20 MPA. Cadaadis imtixaanka, waqtiga xasilinta ma jiri doono wax ka yar 10 s, iyo baxsiga biibiilaha steel lama oggola.
fidsanaan baaritaanka lagu sameeyay doonaa tuubooyin bir la weyn dhexroor dibadda ah 22 mm
carbon ee tayada sare ee steel dhismaha iyo ahama tubooyinka birta (kulaylka u adkaysta) ballaciisu ah sare ee aan ka badnayn 76 mm oo dhumucdiisuna waxay derbiga ah ee aan ka a ka badan 8 mm la hoos gelin doonaa in la ballaariyo baaritaanka. Baaritaanku wuxuu faafeysey waa in la fuliyaa heerkulka qolka. Heerka dibadda ah dhexroor faafeysey ee tusaalaha ah ka dib markii uu gabogabaysmo core top waa 60% saareen Isbaheysiga kulmi doonaan shuruudaha miiska 7. No dildilaac ama dildilaaca waxaa loo ogol yahay oo ku saabsan saamiga Isbaheysiga dib u. Sida laga soo xigtay shuruudaha demander iyo xusay in heshiiska, waxaaga aan birta dhismaha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa ballaariyo baaritaanka.
tuubooyinka steel waa xiran ultrasonic mid la ogaado cillad ka mid ah iyada oo la raacayo qodobada GB / T 5777-2008. Sida laga soo xigtay shuruudaha demander ah, baaritaano kale oo aan burbur lagu dari karaa ka dib markii wada xaajood u dhexeeya qeybiyaha iyo demander iyo tilmaamay in heshiiska.
Imtixaanka daxalka Intergranular
imtixaanka daxalka Intergranular in la qabtaa waa inay ahama tuubooyin bir (kulaylka u adkaysta). Habka Baaritaanku wuxuu noqon doonaa iyadoo la raacayo qodobada E Shiinaha hab ee GB / T 4334-2008, oo u janjeera daxalka intergranular lama oggola baaritaanka ka dib.
Ka dib markii wada xaajood u dhexeeya qeybiyaha iyo demander ah, iyo xusay in heshiiska, demander ayaa cayimi karta hababka kale ee baaritaanka daxalka.
Previous: GB 3087 Heerka biibiile kuleeliyaha aan xuduud lahayn steel daawaha cadaadis Low Dhexdhexaad cadaadis
Next: xuduud lahayn steel daawaha ASTM biibiile A335 Heerka biibiile kuleeliyaha kar
tuubooyinka sarrifka kulaylka
Xuduud lahayn Steel Tubooyinka Waayo Petroleum arrinkaas